အမေးအဖြေများ - JL Co. , Ltd မှ Extract
စက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူသည့်သဘာဝအပင်များမှထုတ်ယူနေကြသည်, သူတို့ကအလုပ်လုပ်ကြသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအတူတူမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ရိုးရိုး, စက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူနှင့်ဓာတုမူးယစ်ဆေးအကြားအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။ စက်ရုံအချို့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်း extracts သော်လည်း, စက်ရုံဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုခံရပါကဓာတုဆေးဝါးများအစားထိုးမရနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ပုံမှန် extracts ။ အများစုစက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူမျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှငျ့အတူရှိ၏။
ကော Group B: ရုက္ခဗေဒအဘို့အစက်ရုံ Extractive ပိုးသတ်ဆေး & တီးရီးယားရောဂါပိုး (Phytogenous) ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ R & D ကိုအသင်း Feed များနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများအဘို့သင့်လျော်သောသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းဆွဲ။
ppm ဆိုလို: သန်းနှုန်းအစိတ်အပိုင်းများ, PPB ဆိုလို: ဘီလီယံနှုန်းအစိတ်အပိုင်းများ
စံထုတ်လုပ်သူအပြောင်းအလဲနဲ့ချမှတ်ကျနော်တို့ပစ္စည်းများကိုရာပေါင်းများစွာအဘို့များစွာသောတစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားအရကျနော်တို့, 60 ကွက်ကနေ 200 ကွက်မှအမှုန်အရွယ်အစားထုတ်လုပ်နိုင်သည်ပို့ကုန်စံကိုလိုက်နာ, စားသုံးဆီနဲ့ officinal စံနှုန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
Feed & ကုသရေးဆေးဝါးများအတွက်
လူအားလုံးတို့သည်ရုက္ခဗေဒကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ feed ကိုများအတွက်ကောင်းသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်နေသော speicification နှင့်အရည်အသွေးအတွက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး, ကိုလည်း Fami QS standard.All နှင့်အတူရုက္ခဗေဒလိုက်နာ, ကျနော်တို့စားနပ်ရိက္ခာတန်းကဲ့သို့တူညီသောအရည်အသွေးကိုစံစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ဥရောပ Feed တရားညီညွတ်မှု၌ရှိကြ၏ ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ feed ကို additiive နှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာစသည်တို့ကိုအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်
ရုက္ခဗေဒပိုးသတ်ဆေး & တီးရီးယားရောဂါပိုး (Phytogenous) အတွက်
နှစ်ပေါင်းများစွာ '' သုတေသန, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းပြီးနောက်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်တီးရီးယားရောဂါပိုးအတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်သင့်လျော်သောတစ်ဦး optimized သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရည်အသွေးအတွက်ရုက္ခဗေဒကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ စာရင်းအားလုံးထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာအတွက်ယခုဖြစ်ကြသည်။
> ရုက္ခဗေဒပိုးသတ်ဆေး & တီးရီးယားရောဂါပိုး (Phytogenous) သည်
> Feed & ကုသရေးဆေးဝါးသည်
> ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီး Powder
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို Jieliang Extract ထံမှဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်အခမဲ့နမူနာရနိုင်မလဲ?
ကျနော်တို့မူလ COA နှင့်အတူသင့်မဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက် 5G-20g အခမဲ့နမူနာတွေနဲ့ client များပေးရန်အလွန်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့လုပ်ပါ။ ထောက်ပံ့ရေးနှင့် Botanical / စက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူသာ, ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ပုံသေနည်းဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများ, စာချုပ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ applications များဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
client များ Jieliang Extract ထံမှအကြွေးရနိုင်မလား?
အကြွေးများအတွက်လျှောက်ထားရန်ကောင်းသောငွေပေးချေမှုစံချိန်နှင့်အတူကွိုဆိုထပ် clients များ။
T / T နဲ့ L / C: Hebei Jieliang ဇီဝသိပ္ပံ Co. , Ltd မှ Extract
တရုတ်ဘဏ်အဘယ်သူမျှမအကောင့်။ 101342734265 ။
Western Union: မစ္စတာ Lijianjun
MOQ (အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်) အမိန့်ကဘာလဲ?
လေတပ်များကသင်္ဘော: MOQ တင်ပို့နှုန်း 45kg ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ရေကြောင်း: MOQ တင်ပို့နှုန်း 25kg ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒါဟာအစအဘယျသို့ထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်, အသေးစိတျကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ) ။
ကျွန်မတစ်ဦးချင်းမကုမ္ပဏီကိုမိပါတယ်။ ငါစက်ရုံ Extract ဝယ်လို့ရပါသလား?
တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော် B2B ၌ရှိကြ၏။ လောလောဆယ်ကျနော်တို့သာဇီဝပိုးသတ်ဆေးနဲ့ feed ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဖြန့်ဖြူးဖို့မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းစီမှအမြောက်အများကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့။
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာတင်ပို့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လိမ္မာ Logistic အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာရန်သင့်အမိန့်အဘို့အ FOB, CIF, တံခါးကိုဝန်ဆောင်မှု (DDU / DDP ဝေါဟာရများ) မှတံခါးကိုထောက်ပံ့နိုင်သောကြောင့်မူတည်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုတတိယပါတီစစ်ဆေးရေး Jieliang နှင့်အတူအလုပ် Extract သလဲ?
ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို SGS, တရုတ်စစ်ဆေးရေးဗျူရို, တရုတ်အမျိုးသားစက်ရုံအရင်းအမြစ်ရာထူးအမည်အင်ဂျင်နီယာစင်တာအဖြစ်, တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်
ကျနော်တို့ ISO9001 နှင့် Fami-QS အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
အဲဒီ ISO စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရ, တိုင်းသုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကုန်ပစ္စည်းအာနိသင်, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အခြားလိုအပ်သောအချက်အလက်များ၏သေချာဖြစ်အသီးအနှံလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းနှင့် QC အဖွဲ့ကဖြန့်ဝေမတိုင်မီစမ်းသပ်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Logistic နှင့် ပတ်သက်. အားလုံး:
bulk ထုပ်ပိုးတစျ: အတွင်း၌နှစ်ဆပလပ်စတစ်အိတ်ပြင်ပစက္ကူဗုံ, 20kgs-25kg / စည်။
bulk ထုပ်ပိုးနှစ်ခု: အပြင်ဘက်လူမီနီယံသတ္တုပါးအိတ်နှင့်အတူအတွင်းပိုင်း 1kg-5kgs ပလပ်စတစ်အိတ်, စက္ကူဗုံအတွက်ထုပ်ပိုး, 20kgs-25kgs / စည်။
bulk Pack သုံးခု: 25kgs, 50kgs, 100kgs နှင့် 200kgs, ပလတ်စတစ်စည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ရာဆိပ်ကမ်းများအရသိရသည်2ပတ်မှ 1: ရေယာဉ်အားဖြင့်အချိန်တင်ပို့။
လေကြောင်းခရီးဖြင့်အချိန်တင်ပို့:2မှ6အလုပ်လုပ်ရက်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Courier န်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများနှစ်ဦးစလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
ပင်လယ်ပြင်တင်ပို့ခြင်း by: Tianjin, ရှန်ဟိုင်း
Air ကိုတင်ပို့ by: ဘေဂျင်း, ရှန်ဟိုင်း